Qoraal Kulul Oo Madaxweynaha Dawlada Taagta Daran Ee Somalia U Gudbiyay Gudoomiyaha Baarlamaanka , Eedaymo Uu La Xidhiidhiyay Af-hayeenka, Muranka Sharci Ee Ansixinta Raysal Wasaraaha Iyo Arrimaha Cakiran | Araweelo News Network (Archive) -
Qoraal Kulul Oo Madaxweynaha Dawlada Taagta Daran Ee Somalia U Gudbiyay Gudoomiyaha Baarlamaanka , Eedaymo Uu La Xidhiidhiyay Af-hayeenka, Muranka Sharci Ee Ansixinta Raysal Wasaraaha Iyo Arrimaha Cakiran
Muqdisho(ANN)Madaxweynaha dawlada taagta daran ee Somalia Sh. Shariif ayaa gudoomiyaha golaha Baarlamaanka u gudbiyay qoraal uu si kulul ugu weerarayo qaabka uu gudoomiyihu u maamulay qorshaha fadhigii todobaadkii hore fashilmay ee la doonayay inay mudanayaashu
ku ansixiyaan raysal wasaaraha cusb, kaas oo aanay suurta gelin balantii danbe ee fadhiga loo qaban lahaa mudanayaasha, iyadoo ay xaaladu cirka isku shareertay maalmihii u danbeeyay.
Qoraalka uu Madaxweyne Shariif kaga hadlay xaalada waqtigan ee xukuumadiisa, ansixin la’aanta Raysal wasaaraha cusub iyo qaabka sharci ee u banaan gudoomiyaha Baarlamaanka Shariif Axmed, waxay nuqul ka mid ah oo soo gaadhay shebekada warbaahinta ee Aaraweelonews u qornayd sidan;- “Sida ku cad Axdi Qarameedka Soomaaliya, Madaxweynaha ayaa leh awoodda magacaabidda ra’iisul wasaaraha (eeg qodobka 44-aad ee Axdiga DFKMG ah). Baarlamaankuna wuxuu ansixiyaa magacaabidda uu sameeyo Madaxweynaha, Maadaama uu Baarlamaanku leeyahay awoodda ansixinta magacaabista uu sameeyo Madaxweynuhu, wuxuu kaloo awood u leeyahay inuu diido, sababtoo ah haddii ay jirto awoodda ansixinta, waa inay jirtaa awoodda diidmada.
Isla markii uu khudbaddiisa dhammeeyey ayuu Afhayeenka Baarlamaanku wuxuu shaaca ka qaaday inuu hayo laba mooshin oo iska soo hor jeeda. Mooshin ay 140 xildhibaan ku codsanayaan in raíisul wasaaraha loogu codeeyo hannaan badheedh, ama gacan taag ah. Iyo mooshin ay 40 xildhibaan ku codsanayaan in hannaan qarsoodi ah loogu codeeyo raíisul wasaaraha.
Qodobkan 40-aad ee Xeer-Hoosaadka Baarlamaanka wuxuu ku saabsan yahay marka loo codaynayo hindise sharci ee kuma saabsana kalsooni u qaadid Raysul Wasaare cusub iyo xukuumadiis toona.Sidoo kale, waxa uu ka hor imaanayaa qodobka 82-aad, faqraddiisa 2-aad ee Dastuurkii 1960-kii, kaas oo isna si aan mugdi ku jirin u qeexaya in codka kalsooni siinta raíisul wasaaraha ama dowladdiisa loo qaado hannaan cod bareer ah (gacan taag).
Waliba, qodobka 40-aad ee Xeer-Hoosaadka Baarlamaanka, iyo goáankii uu qaatay Afhayeenka Baarlamaanka, waxay ka horímaanayaanqodobka 30-aad, faqraddiisa 6-aad ee isla Xeer-Hoosaadka Baarlamaanka, kaas oo caddeynaya in mooshinkii ka horímanaya Shareecada Islaamka, Axdi Qarameedka, Dastuurka …, inuu noqnaya wax kama jiraan. Waxaa sidaas oo kale qaba qodobka 98-aad ee Dastuurkii 1960-kii.
Go’aanka Afhayeenku wuxuu fulin waayay qodobka 82-aad, faqraddiisa 2-aad ee Dastuurkii 1960-kii, kaas oo ay tahay in loo noqdo marka ay soo baxaan arrimo aan ku caddeyn Axdi Qarameedka.
Wuxuu ka baaqsaday inuu u hoggaansamo, isla markaana dhaqan-galiyo qodobka 30-aad, faqradda 6-aad ee Xeer-Hoosaadka, kaas oo si cad u qeexaya in mooshinkii ka horímanaya Shareecada Islaamka, Dastuurka 1960-kii iyo shuruucda kale ee dalka, inuu noqonayo mid aan waxba ka jirin. Mooshinka dalbanaya codka qarsoodiga ah wuxuu ka horímaanayaa qodobka 82-aad, faqraddiisa 2-aad ee Dastuurkii 1960-kii, wuxuuna ku saabsan yahay oo kaliya marka hindise sharci la samaynayo.
Afhayeenka Baarlamaanku wuxuu ka baaqsaday inuu mudanayaasha baarlamaanka siiyo fursad ay uga doodaan labada mooshin, kaddibna ay fikraddooda cabbiraan, ama ay labada mooshin midka ay raacsan yihiin doortaan.
Afhayeenku wuxuu kaloo si ula kac ah isaga indha-tiray dhaqanka soo jireenka ahaa ee siyaasadda Soomaaliya, kaas oo ahaa in raíisul wasaaraha aan la is hortaagin isagoo aan shaqaba billaabin.
Wuxuu cabbiri waayey in uu qiimeeyo marxaladda adag ee uu dalku marayo taas oo aan qaadi karin khilaaf iyo is-qab-qabsi siyaasadeed.
Haddaba, Madaxweynaha Soomaaliya, wuxuu ugu baaqayaa Afhayeenka Baarlamaanka inuu sharciga ilaaliyo, isla markaana aanu iska hortaagin xildhibaannada Qaranka gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah, gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee uu dalku ku jiro dagaalka, loona baahan yahay xukuumad u istaagta wax ka qabashada howlaha adag ee horyaalla.” Ayaa lagu soo gebagebeeyay qoraalka.
Dhinaca kale Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa wixii ka horeeyay qoraalka Madaxweyne Sh. Shariif lala xidhiidhinayay inuu qayb ka yahay dedaalka la doonayo in lagu ansixiyo Raysal wasaaraha, balse qoraalka Sh. Shariif ayaa si cad u iftiimiyay eedo la xidhiidha inuu gudoomiyaha Baarlamaanku qayb ka yahay ansixin la’aanta Raysal wasaaraha cusub, waxaana loo malaynayaa inuu gudoomiyuhu hada la saftay kooxda sida weyn ugu ololaynay in aan gebi ahaanba la ansixin raysal wasaaraha cusub, Mr. Farmaarjo, isla markaana waxa kale oo ay weedhaha ku qoran qoraalka Madaxweyne Shariif u muuqdaan kuwo cirka ku shareerary xaalada khilaafka siyaasadeed, iyadoo ay kala qaybsanaanta iyo khilaafka Madaxweyne Shariif iyo Gudoomiyaha Baarlamaanku horseedi karto inay xaaladu faraha ka baxdo oo ay sidaa ku burburto gebi ahaanba dawlada taagta daran ee ay ku hareeraysan yihiin kooxaha dagaalka kula jira ee Al-shabaab iyo xisbul islaam, balse waxa indhaha lagu hayaa jawaabta uu ka bixiyo Af-hayeenka Baarlamaanku qoraalka madaxweynaha iyo ficilka uu ka qaato, taas oo saamayn ku yeelanay xaalada muranka iyo khilaafka.